I-T-shirt → Iimpahla zentengiso • I-P & M yobuchwephesha yobuchwephesha
Ihempe Yingubo esemgangathweni ephezulu esebenza kakuhle njengempahla yokunxiba esebenzayo ebantwini, abasebenzi okanye abafundi. Ii-T-Shirts zaziwa kakhulu kwiminyaka emininzi. Ukungafani kwabo kunye nokuguquguquka kwabo kube negalelo kakhulu ekudumiseni kwabo.
Iik-shti zingasetyenziswa zombini iimpahla zabasebenzi ngokunjalo imveliso yokuthengisa.
Zibonakaliswa ngokuguquguquka okuphezulu, okwandisa uluhlu lwezicelo. Ubutyebi bokunikezelwa kwee-T-shirts kukuvumela ukuba uthenge ezahlukeneyo, imibala, iipateni kwaye, ngaphezu kwako konke, ubungakanani.
Ukongeza kwii-T-shirts zakudala, sinezikipa ezilumkisayo ezikhethwe ngabameli bezinto ezisetyenziswayo, ezokuhambisa kunye nezokwakha.
Sinikezela ngeentlobo ngeentlobo zeempahla ukuze wonke umntu afumane imveliso ehlangabezana neemfuno zabo. Sineemodeli zeeklasi ezahlukeneyo - umgangatho kunye nomgangatho weprimiyamu.
Ngenxa yomgangatho wabo ophezulu, baya kwanelisa kwanabona bathengi bafuna kakhulu. Njengabanye iimveliso -Izikipa zingenziwa zibe zezakho kunye isambatho sekhompyuter okanye ukushicilelwa kwesikrini.
Ngexesha elifanayo, kufuneka kukhunjulwe ukuba kwimeko yokufakelwa, iigraphics ezinobuninzi obuphezulu kwindawo encinci kakhulu azicetyiswa. Kwicala lethu ngenxa yeminyaka emininzi yamava kunye nenkonzo ekhethekileyo, unokufumana uncedo kolonahluko uxanduva kakhulu.
Sikwabonelela ngamaxabiso okhuphiswano kunye nokufezekiswa kokulandelelana ngokukhawuleza. Siyakumema ukuba ufumane ikhowuti yasimahla.
Ubunzima obukhulu beT-shirt
Iikipa kunye nempahla yokunxiba, ukuze zinxulunyaniswe nomgangatho kunye nobuchwephesha, kufuneka zomelele kwaye zikhululeke, ngakumbi xa sifuna ukubeka inkampani okanye iligi yeklabhu kuyo.
Izikipa kwivenkile yethu zenziwe ngezinto ezisindayo, ezenza ukuba zinganyangeki kumonakalo.
Nokuba ukuhlamba okuphindaphindiweyo akubeki mngcipheko. Impahla igcina uhlobo lwayo lwangempela lweeveki ezininzi, nto ezo ezenza ingeniso kule mveliso ibe yingeniso.
Iikipa ziyafumaneka kwezi zethu Ivenkile zenziwe ngezinto ekumgangatho ophezulu ezihambelana nomsebenzisi kwaye zimvumela inkululeko yokuhamba. Ingqokelela yeT-shirts esekwe kwitekhnoloji ye-ACTIVE-DRY ifanelwe kuqwalaselwa ngokukhethekileyo. Badlula kwiimviwo nakwiimeko ezigqithileyo, apho kukho umngcipheko omkhulu wokuthuka kakhulu.
Ukugqitywa ngononophelo kwezinto kunye nokuchaneka kweenkcukacha zenza ukuba yingubo eya kusebenza kwiimeko ezininzi.
I-T-shirts zisetyenziswa ngokuzimisela njengezambatho zabasebenzi, ngakumbi kuseti, umzekelo, ngezinto zempahla yexesha elibandayo, umzekelo. Uboya, kodwa baphathwa njenge gajethi ehlanganisiweyo yabathengi okanye iikhontraktha.
Ukusetyenziswa kwabo ngumbhinqiso kukwasebenza ngexesha leentlobo ezahlukeneyo zeziganeko okanye njengebhaso kukhuphiswano. Konke kuxhomekeke kwimbono yophawu. Yindlela yezoqoqosho yokuqinisekisa ukuthuthuzeleka kwakho kunye nabamkeli bakho, kwaye kwangaxeshanye ube nomdla kolu phawu.
Ii-T-shirts ezicetywayo kunye nee-T-shirts zenziwe ngononophelo.
Ukugqitywa kobuhle bezixhobo kuyenza ibe ngubo eza kusebenza kumashishini amaninzi awahlukeneyo. Iisheti zihlengahlengisa inani, kodwa azithinteli intshukumo okanye zibangele ukungonwabi.
Phakathi kwee-t-shirts kukho imodeli yamadoda, abafazi, abantwana kunye neyonke-unisex. Kufuneka ukhethe ubungakanani obufanelekileyo. Iimodeli zokuhlaziya liqela elikhethekileyo leemveliso, ngenxa yoko kunokwenzeka ukwandisa inqanaba lokhuseleko kwindawo yokusebenza.
Sixhomekeke kuwe ekukhetheni kunye nokwenza ubuntu kwiimveliso. Sinepaki yomatshini ehamba phambili osinika umsebenzi ofanelekileyo kunye nomgangatho ophezulu wabathengi bethu.
Uluhlu olupheleleyo lweemodeli lunokuthengwa zombini kwivenkile yethu ekwi-Intanethi www.pm.com.pl okanye kwivenkile yethu kwiAllegro "PRODUCER-BHP".
Ukuba ufuna ukubona iodolo yethu yomzekelo, nceda undwendwele ithebhu malunga firmie.
Iikipa eziprintiweyo ze-allegroIzikipa ze-decathlon ezineprintaIzikipa ezipholileyoApho kuprintiweyo izikipaUngazithenga phi izikipa eziprintiweyoUngazithenga phi i-t-shirts ngokuprinta kwakhoapho ungathenga khona izikipa eziprintiweyoApho ungayalela khona ii-t-shirts ngokuprinta kwakhoapho unokwenza khona i-T-shirts ngokuprintaApho kufanelekileyo uku-odola i-t-shirts ngokuprinta kwakhoApho uku-odola i-t-shirts eprintiweyoApho uku-odola i-t-shirts ngokuprinta kwakhozenzelwa phi izikipa eziprintiweyoKubiza malini ukuvelisa isikipa esiprintiweyoKubiza malini ukwenza isikipa esishicilelweyouzihlamba njani izikipa ezimhlophe eziprintiweyouzihlamba njani izikipa eziprintiweyoindlela yoku-ayina i-T-shirts eziprintiweyozenziwa kanjani izikipa eziprintiweyoUyenza njani i-t-shirts eprintiweyoIikipaIikipa eziyi-3dUkuqhuba i-t-shirts kunye nokuprintaIikipa zabafaziIikipa zabasetyhini ezinoshicileloIikipa zabasetyhini ezinooshicilelo lwakhoIikipa zabantwana abaneprintUkuqhuba i-t-shirts kunye nokuprintaiziqhamo zee-t-shirt ezishicilelweyoIzikipa zonyango ezineprintaIikipa zamadodaIikipa zamadoda ezineempapashoIikipa zamadoda ezineempapasho ezi-3dIikipa zesithuthuthuIzikipa zokuzilolongaIikipa zesikoiihempe ze-nbaiingubo zokulala zabafaziIihempe zebhola ekhatywayoIhempe zebhola kunye nokuprintaIjezi yebhola ekhatywayo eprintiweyoIhempe zepolo ezinoshicileloIjezi zeqela lasePolandIikipa zomsebenzi ezishicilelweyoiihempe zemidlaloIzikipa zemidlalo ezinoshicileloIzikipa zemidlalo ezinoshicilelo lwakhoIhempe ezisebenzayoI-t-shirts ezinokuthambisa ezishicilelweyoI-T-shirts eziprintiweyoI-t-shirt eneprinta ye3DI-T-shirt ezinoprinta lwe-allegroI-T-shirt enombhalo weBiałystokI-t-shirts ezineziprinta zabafaziIikipa ezineshicilelo yabantwanaI-T-shirts kunye nokuprinta kweGdańskI-T-shirts eziprintiweyo apho ungathenga khonaI-T-shirt eneprinta apho uza kuyala khonaIzikipa ezineshicilelo zokwenzaI-T-shirts ezinamaphepha afana notata, nyanaI-T-shirts ezinopapasho lweKatowiceI-T-shirt eneprinta ye KrakowIikipa ezineshicilelo lesikhepheI-T-shirts kunye nokuprinta kweLublinIikipa ezineshicilelo yamadodaIikipa eziprintwe ngokwesikoI-T-shirts enoprint olsztynI-T-shirts kunye nepoznań yokuprintaI-T-shirt enoshicilelo lwabantuI-T-shirt enebristles eprintiweyoI-T-shirt eneprinta yaseWarsawI-T-shirts kunye neprinta yakhoI-T-shirts ezinombhalo oshicilelweyoI-T-shirt enemibhalo ebhaliweyoI-T-shirt eneprinta yokuthand 'izweIzikipa eziprintiweyoI-T-shirt ezinoprinta i-allegroI-T-shirts eprinta eyakho iKrakowI-T-shirt eneprinta yakho poznańI-T-shirts eprinta eyakho ngexabiso eliphantsiI-T-shirts kunye neprinta yakho iWarsawI-T-shirts kunye neprinta yakho eprintiweyoIikipa ezinkuluUkuprintwa kweT-shirtIinyithi zeT-shirtsUyilo lwe t-shirtIzikipa ezihlekisayoIzikipa ezihlekisayo ezinoshicileloIikipa ezingabizi kakhulu ezinoshicileloIzikipa ezingabizi kakhulu ezinoshicilelo lwakho
5 / 5 ( 19 iivoti )